साढे ७ अर्ब बढीको आईपीओ निष्काशन गर्दै २९ कम्पनी, कुनको कति कित्ता ? |
Home शेयर बजार साढे ७ अर्ब बढीको आईपीओ निष्काशन गर्दै २९ कम्पनी, कुनको कति कित्ता...
साढे ७ अर्ब बढीको आईपीओ निष्काशन गर्दै २९ कम्पनी, कुनको कति कित्ता ?
काठमाडौं । विभिन्न २९ कम्पनीहरुले आईपीओ निष्काशनका लागि नियामक निकायमक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् ।
आईपीओ निष्काशनका लागि १९ वटा जलविद्युत कम्पनी, ६ वटा लघुवित्त, २ बीमा र अन्य दुई कम्पनीहरुले बोर्डमा निवेदन दिएका हुन् । यी कम्पनीहरुले ७ अर्ब ५१ करोड ४६ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको ६ करोड ८४ लाख २६ हजार ४ कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्न लागेका हुन् ।
धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र कम्पनीहरूको सेयर निष्कासन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । तर, चार महिनायता बोर्डको अध्यक्ष रिक्त हुँदा सेयर निष्कासनका लागि स्वीकृति हुन सकेको छैन । तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष भिष्म ढुंगानाले सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर भित्रि कारोबार गरेको खुलेपछि सरकारले उनलाई असोज दोस्रो साता सरकारले बर्खास्त गरेको थियो ।
अनुमतिको पर्खाईमा रहेका मध्ये सबैभन्दा बढी आईपीओ रिलायवल लाइफ इन्स्योरेन्सको रहेको छ । कम्पनीले १ अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले ६० लाख कित्ता आईपीओ निष्काशनका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको हो । कम्पनीले सेयर मूल्यमा ११२ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरि २१२ रुपैयाँमा आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धकमा सिभिल क्यापिटल मार्केट रहेको छ ।
सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरूमध्य सयपत्री हाइड्रोपावर, मोलुङ हाइड्रोपावर, रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स, थ्री स्टार हाइड्रोपावर, राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन, सिवाईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था, आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था, स्वेतगंगा हाइड्रो, मन्दाकिनी हाइड्रो, सिक्लेस हाइड्रो, सुपरमाई हाइड्रोपावर, साञ्जेन जलविद्युत र इस्टर्न हाइड्रोपावरको प्रारम्भिक समीक्षा भइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।
खुसिको खबरः ३६ करोडको आईपीओ आउँदै !
लगानिको नयाँ अबसरः ३० लाख कित्ता सेयर निष्कासन हुँदै !
८३ हजार सेयर बिक्री गर्दै छिमेक लघुवित्त, प्रतिकित्ताको मूल्य कति ?